ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး အောက်က လျို့ဝှက် ချက် ၂ ခု ကို သိခဲ့သော အာမေးနီးယန်း လူမျိုး – CharTake
chartake | July 17, 2020 | KNOWLEDGE | No Comments
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာ လူမျိုး တို့ရဲ့ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ရာ စေတီတော် ကြီး ဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံ စေတီ တော်ကြီး အောက် မှာ ပင်လယ်ရေ အတက် အကျ အလိုက် ရေ အနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ် စေတဲ့ (၁၀) ပေ ပတ်လည်လောက် ရှိတဲ့ ရေတွင်း နဲ့ အဲဒီ ရေတွင်း ထဲမှာ (၆) ပေခွဲ လောက် ရှိပြီး ရတနာ များ စီချယ် ထားတဲ့ ရွှေလှေ တစ်စီး ရှိတယ် လို့မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူး ခဲ့တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဖွား အာမေးနီးယား လူမျိုး ဒီအက်စ် အပရမေ က ပြောကြား ခဲ့တယ် လို့ ၁၃. ၃. ၆၈ နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ မှာ ဖော်ပြ ခဲ့တာ ကို ကျီးမနိုး တင်ဝင်း ( ပေါင်းတည် ) ရဲ့ ပြန်လည် ဖော်ပြ ချက် အရ သိရှိ ရပါတယ်။
မစ္စတာ အပရမေ ကို ကြေးမုံ သတင်းစာ က တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ရာမှာ ၁၉၀၄ ခု၊ သူ့ရဲ့ အသက် (၇) နှစ်သား အရွယ် မှာ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ အတူ ရွှေတိဂုံ ဘုရား ကို သွားရောက် ခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် ရဲ့အရှေ့ မြောက် ထောင့်၊ တနင်္ဂနွေ ထောင့်ရှိ ဌာ ပနာ တိုက်ဝ ကို ရောက်တဲ့ အခါမှာ ရသေ့ ကြီး တစ်ပါး နဲ့တွေ့ လို့ချဉ်းကပ် တောင်းပန် ပြီး ဌာပနာ တိုက်ထဲ ကို ဆင်းခဲ့ တယ် လို့ဆို ပါတယ်။
ရသေ့ ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် အရ ဌာပနာ တိုက်ထဲ ကို ဆင်းသွား တဲ့ လမ်း တစ်လျှောက် လုံး မှာ ယောဂီဝတ် နဲ့နီဝါရောင် ဝတ် ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦး ကို (၈) ပေ၊ (၉) ပေစီ ခြားပြီး တွေ့ရတယ် လို့ဆို ပါ တယ်။ ဌာပနာ တိုက် ရဲ့ ပတ်ပတ်လည် ကို အုတ်များ နဲ့အခန်း (၃၆) ခန်း တည်ဆောက် ထားတယ်။ အလယ် တိုင် မရှိ ဘူး။ အလယ် ဗဟိုမှာ တော့ (၁၀) ပေ ပတ်လည် လောက် ရှိတဲ့ ရေတွင်း ရှိတယ်။ ရေတွင်း ဟာ ပင်လယ်ရေ အတက် အကျ အလိုက် ရေ အနိမ့် အမြင့် ဖြစ်ပေါ် တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေတွင်း ထဲမှာ အလျား (၆) ပေ ခွဲခန့်ရှိပြီး ကျောက်မျက် ရတနာ များ နဲ့စီချယ် ထားတဲ့ ရွှေကရဝိတ် လှေ တစ်စင်း ရှိတယ်။ လှေဟာ ဒီရေ အတက် အကျ အလိုက် ရေတွင်း ထဲမှာ အနိမ့် အမြင့် လှုပ်ရှား နေတယ်။ ကရဝိတ် ရွှေလှေ ပေါ်မှာ ဆံတော် များ လို့ယူဆ ရတဲ့ ဌာပနာတွေ ကိန်းဝပ်လျှက် ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုဝါ လွှမ်းထား လို့ ဆံတော် လို့အတိအကျ မပြော နိုင်ဘူး လို့ဆိုပါ တယ်။ ဌာပနာ တိုက် ရဲ့ ထူးခြား ချက် မှာ တစ်ခန်း လုံး ထိန်လင်း နေခြင်း ဖြစ်တယ်။
တစ်ခု တည်း သော အလင်းရောင် ဟာ အချိန် အခါ မရွေး ရွှေလှေပေါ် ကို အချိန် မရွေး ထိုးစိုက် ကျရောက် နေတယ်။ ထုထည် ကြီးမား လှတဲ့ စေတီ အဆောက် အအုံ ကြီး ကို ပင်မ အလယ်တိုင် မပါ၊ သံယက် မ မရှိပဲ ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲ များ နဲ့သာ တည်ဆောက် ခဲ့တယ်။ ပင်လယ် ရေဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက် နဲ့အလင်းရောင် ယူထား ပုံက ရှေးဗိသုကာ တွေရဲ့လက်ရာ ဖြစ် တယ်။
ခမ်းနား ဆန်းကြယ် တဲ့ ဌာပနာ တိုက်ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင် ခဲ့ရ တာ ဖြစ်လို့နှောင်းလူတွေ သုတေသန ပြု နိုင်အောင် ရွှေတိဂုံ ဂေါပက အဖွဲ့ကို မြေပုံဆွဲ လို့တင်ပြ ခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံ ဂေါပက အဖွဲ့ ကလည်း မစ္စတာ အပရမေ ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ပြီး ဌာပနာ တိုက် တည်နေရာ ကို လိုက်လံ ပြသ စေတဲ့ အခါမှာ ဌာပနာ တိုက် လှိုဏ်ဂူဟာ ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင် တော် တနင်္ဂနွေ ထောင့်ရှိ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား နဲ့ဆုတောင်း ပြည့် တန်ဆောင်း နေရာမှာ ရှိတယ် ဆိုပေမဲ့ လည်း နောက်တိုး တန်ဆောင်း တွေနဲ့ ဘုရားများ ထပ်မံ မွမ်းမံ ပြင်ဆင် ထားမှု ကြောင့် အတိ အကျ ပြသ နိုင်ခြင်း မရှိပဲ ဆုတောင်း ပြည့် စေတီ ရဲ့လှိုဏ်ဂူ အောက်မှာ သာ ရှိတယ် လို့ ခန့်မှန်း ညွှန်ပြ သွားနိုင် တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မစ္စတာ အပရမေ ကို လွစ္စ လမ်း ( ယခု ဆိပ်ကမ်း သာလမ်း ) အမှတ် (၂၅) မှာ ၁၈၉၅ ခုနှစ် က ဖွားမြင် ခဲ့တာပါ။ မိဘ များမှာ မစ္စတာ အက်စ် အပရမေ နဲ့ မစ္စက် ရိုစ် လူကပ်စ် တို့ ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာ အမျိုးသမီး ဒေါ်သိန်းရွှေ နဲ့ အိမ်ထောင် ကျပြီး သားသမီး ၅ ယောက် ထွန်းကား ခဲ့ကာ သားသမီး မြေးများ နဲ့ အတူ ဘောက် ထော် မှာ နေထိုင် တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြ ထားပါ တယ်။
မစ္စတာ အပရမေ ကို ယနေ့ကြေးမုံက တွေ့ဆုံ မြေးမြန်း ပြီး ၁၃. ၃. ၆၈ နေ့မှာ ဖော်ပြ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ချိန် မှာ မစ္စတာ အပရမေ ဟာ (၇၃) နှစ် ရှိပြီ လို့ဖော်ပြ ထားပါ တယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဝင် အပေါင်း ယုံကြည် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ် ပူဇော် ကြ တဲ့ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် မြတ်ကြီး ရဲ့ အောက် ပေ (၆၀) ခန့် အကွာ မှာ တည်ရှိ တဲ့ ဆံတော် တွင်း ဌာပနာ တိုက်ကြီး အကြောင်း ကို နှောင်း လူများ သိရှိ စေရန် ထပ်မံ ဖော်ပြ ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
ထူးခြားမှူတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ပုဂံက စိမ်းညက်ညီအစ်မဘုရား